The Ab Presents Nepal » यार्सा संकलनको राजस्वको बिषयलाई लिएर कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीबीच कुटाकुट!भाग भण्डा नमिलेर त होला !
यार्सा संकलनको राजस्वको बिषयलाई लिएर कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीबीच कुटाकुट!भाग भण्डा नमिलेर त होला !
डोल्पामा यार्सा संकलनको राजस्वको बिषयलाई लिएर कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीबीच कुटाकुट भएको छ । जिल्लामा पर्ने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय सुलिगार्डका निमित्त संरक्षण अधिकृत र अन्य कर्मचारीबीच विवाद भएपछि कुटाकुट भएको हो ।
उनीहरुबीच यार्सागुम्बा संकलनबाट आएको राजस्व जम्मा गर्ने बिषयबाट विवाद सुरु भएको थियो । सोही पोष्टबाट गएका कर्मचारीले यार्सागुम्बा संकलन गरेको राजस्व बैँकमा जम्मा गर्न अनुमति मागेको तर प्रमुख प्रमोदकुमार यादवले भने पूरै हिसाब गरेर एकसाथ जम्मा गर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । कुटाकुट गर्ने सातजना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
झगडा हुनु अघि उनीहरुले मदिरा सेवनसमेत गरको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । मदिरा सेवनपछि राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय सुलिगार्डका निमित्त संरक्षण अधिकृत यादव, सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल खनाल र रेन्जर छत्र खड्गामाथि आक्रमण भएको खुल्न आएको छ ।
हाकीममाथि आक्रमण गर्ने खरिदार देवेन्द्र जिसी, हरि रावल, मनिकृष्ण पाण्डे, महेश्वर रावल, डिल्ली सुनार, खगेन्द्र भण्डारी र प्रकाश बुढालाई पाँच दिन अघिनै प्रहरीेले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । तर पक्राउ परेका कर्मचारीहरुले भने यार्सा संकलनको दुबारे जानकारी दिँदै गर्दा उल्टै आफुहरुमाथि हाकिमहरुले आक्रमण गरेको बताउदै आएका छन् । न्युज 24 बाट साभार